1 MPANJAKA 17.1-24	F.1, 2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 MPANJAKA 17.1-24	F.1, 2
VELONA TOKOA JEHOVAH !
Toa nilamindamina tao amin’ny fiainam-panompoan-tsampiny Ahaba kanjo indro nipoitra tampoka Elia.Toy ny fiasan’ny Fanahy izay tsy fantatra izay ihaviany (Jaona 3.8) no fihavian’i Elia eto.
Tsy Bala no mifehy ny orana. Tian’i Elia habaribary amin’i Ahaba izay efa lasa mpanompon’i Bala (16.31) fa miankina amin’ Ilay tena Andriamanitra ny filatsahan’ny orana na tsia (1; Matio 5.45b). Fahasahiana lehibe no nasehon’ny mpaminany eto satria mety mahafaty ny fitsikerana ny mpanjaka tahaka izay nahazo an’i Jaona (Matio 14.4, 8-11), izay ambaran'ny Tompo fa Elia vaovao (Matio 17.12).
Ny Tompo no miahy an’i Elia. Nampiasain’Andriamanitra tamin’ny fomba mahagaga ny goaika (4-6) sy ilay vehivavy mpitondratena (9-16) hikarakara an’i Elia. Ny tena izy koa anefa dia Elia no namelona an’io vehivavy io izay efa saika maty mosary (12b) ! Aza milaza ary hoe “Inona no hohaninay?” (Matio 6.31), satria ny Ray aza mamelona ny voro-manidina (Matio 6.26) ary indraindray koa ny voro-manidina no asainy mamelona ny olony...
Nahoana no Sidona no nofidin’Andriamanitra? Tsy tao Isiraely fa tany Sidona no nampialokalofan’Andriamanitra an’i Elia (ny mpaminany tsy masina an-taniny : Lioka 4.24 !). Tsy hadino koa fa tanàna Jentilisa nandehanan’i Jesoa i Tyro sy Sidona (Matio 15.21-28). Nofidian’Andriamanitra angamba Sidona satria ao an-tanànan’i Jezebela izay sidoniana (1 Mpanjaka 16.31) mihitsy no tiany hanehoana ny heriny ka ilay mpitondratena dia efa resy lahatra, rehefa velona indray ny zanany, fa “marina ny tenin’i Jehovah“ aloakan’ny vavan’i Elia ( 17-24).
Diniho tsara: tahaka ny namangian’Andriamanitra an’i Ahaba sy ilay mpitondratena dia aza avela handalo ny famangian’Andriamanitra anao.